बिहिबार बिहानै पाथिभारा माताको दर्शन गरि जन्नुहोस् तपाँइको राशिफल – Vision Khabar
प्रकाशित मितिः बिहिबार, भदौ ५, २०७६ || 714 Views || |
आज वि.सं. २०७६ साल भदौ ५ गते बिहीबारको राशिफल
अवसर प्राप्त भए पनि परिस्थितिवश काममा बाधा होला। बेसुरको निर्णयले समस्यामा पुर्याउनेछ । आफ्ना कमजोरीमाथि टिप्पणी हुन सक्छ । पहिलेको सफलताले भने हौसला जगाउनेछ । बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ । शुभचिन्तकहरूको मनोभाव विचार गरेर अघि बढ्नुहोला । आफ्नो सूचना बाहिरिने समय भएकाले गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला ।
छिमेकमा असमझदारी बढ्ने देखिएकाले होसियारीसाथ काम लिनुहोला । फाइदाका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला । केही मात्रामा खर्च बढ्नेछ भने व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ला । अर्थअभाव खट्किनाले काममा बाधा आउन सक्छ । फाइदाका पछि लाग्दा समस्या आउन सक्छन् । आवश्यक पर्दा सरसापटबाट धन जुट्नेछ । लामो यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
३. मिथुन – (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह )
आयआर्जनका स्रोत बढ्नेछन् र दैनिक काममा पनि उल्लेख्य फाइदा हुनेछ । परिश्रमको फल प्राप्त हुने समय छ । दिगो फाइदा हुने काममा लगानी गर्ने मौका छ । व्यापार तथा साझेदारीमा पनि फाइदा हुनेछ । आम्दानी बढ्नेछ भने परिवारजनका आवश्यकता पूरा हुनेछन् । पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनेछ । मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउन सक्छ ।
४. कर्कट – (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो )
राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ । विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् भने दिगो काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुनेछ । पदासीन व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्नेछ । सामाजिक काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । मिहिनेतले जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनेछ । प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ । अरूलाई प्रभावित पारेर दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ ।
५. सिंह – (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे )
परिस्थितिवश चिताएको काममा बाधा पुग्नेछ । अरूका लागि रकम र बुद्धि खर्चनुपर्ला । आंशिक फाइदा भए पनि चिताएको काम पूरा गर्न समय लाग्नेछ । अवसरवादीहरूले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउन सक्छन् । समयअनुसार चल्न नसक्ता अलि दुस्ख पाइनेछ । केही बाध्यात्मक परिस्थितिले अलमल्याए पनि भविष्यका लागि सम्भावना खोजी गर्ने समय छ ।
बेसुरमा काम गर्ने बानीले समस्या निम्त्याउन सक्छ । स्वास्थ्य प्रतिकूल रहनेछ भने गरेका कामबाट पनि तत्काल फाइदा उठाउन मुस्किलै पर्नेछ । हिसाबकिताबमा होसियार रहनुहोला । हडबडको त्रुटिले काम दोहोर्याउनुपर्ने हुन सक्छ। अध्ययनमा त्यति धेरै समय दिन नसकिएला । श्रम र लगानीका तुलनामा व्यावसायिक प्रतिफल कम मात्र हातलागी हुनेछ ।
अतिथिको रूपमा सत्कार पाइनेछ । आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने सम्भावना छ । व्यवसायले रमाइलो यात्रा गराउन सक्छ । काममा साथीभाइको सहयोग जुट्नेछ । धन तथा ज्ञानको भण्डार बढ्नेछ भने जीवनशैली आनन्दमय रहनेछ । प्रियभेट हुनुका साथै विशेष उपहार प्राप्त होला । सोखले मालमत्ता जुटाउन प्रेरित गर्नेछ ।
८.बृश्चिक – (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु)
दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ । मिहिनेतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्छ । रकम तथा भौतिक साधन जुट्नाले दिन उत्साहजनक रहनेछ । लगनशीलताले अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिनेछ । शत्रुभाव राख्नेहरू स्वयं कमजोर हुनेछन् । बुद्धिको उपयोगले अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ । लामो यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
९. धनु – (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे )
कामको मेसो नमिल्दा केही अलमल हुनेछ । तापनि मिहिनेत गर्दा अध्ययनमा प्रगति हुनेछ । गुरुजनको सुझाव र सन्तानको सहयोग लाभदायी बन्नेछ । कर्मक्षेत्रका बाधा हट्नेछन् र नयाँ कामतर्फ आकर्षित भइनेछ । काममा धेरै लाभ उठाउन नसकिए पनि समस्या सुल्झनेछन् । पहिलेका कमजोरी सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । भूमि तथा पशुधनबाट लाभ मिल्नेछ ।
बेसुरमा वचन दिने बानीले समस्या निम्त्याउनेछ । निर्णायक मोडमा दुविधा उत्पन्न हुने समय रहेकाले हतारमा निर्णय नलिनुहोला । तत्कालको फाइदा हेर्दा परिस्थिति बिग्रन सक्छ । शुभचिन्तकहरूलाई साथमा लिएर काममा जुट्नुहोला । महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक नगर्नुहोला । साझेदारीको सम्झौता भंग हुन सक्छ । तत्कालको फाइदा हेर्दा घाटा हुन सक्छ ।
११. कुम्भ – (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द )
प्रयत्न गर्दा राम्रै अवसर जुट्नेछ । साथीभाइले राम्रै सहयोग जुटाउनेछन् । भौतिक साधन जुट्नाले दिगो योजना प्रारम्भ होला। व्यापारमा लाभ हुनेछ । सेवामूलक कामबाट प्रतिष्ठा पाइनेछ । प्रतिस्पर्धीहरूले हार खानेछन् भने काममा मिहिनेतको फल प्राप्त हुनेछ । साथीभाइको सहयोगले काम सम्पादन हुनेछ । दिगो फाइदा हुने कामको जग बसाउने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
स्वयं आँट गर्न नसक्दा अरूको सहयोग आवश्यक पर्ला । तर, अरूको मात्र भरपर्दा काम अधुरो रहनेछ । लेनदेन तथा हिसाबकिताबमा होसियार रहनुहोला । सञ्चित रकम खर्चनुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ । दिगो काम प्रारम्भ गर्न केही समय पर्खनुपर्ने देखिन्छ । फाइदाका लागि काम दोहोर्याउनुपर्ने हुन सक्छ । विवादास्पद कामको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला ।
PREVIOUS POST Previous post: संसदमा रवि लामिछानेको प्रसंग जोड्दै सांसद मल्लले सुनाए वेदको कथा (भिडियोसहित)
NEXT POST Next post: यू-१९ एसिया कप खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणा